Airbus neLufthansa Technik vanopa Cargo yenguva pfupi mumhinduro dzeCabin
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Airbus neLufthansa Technik vanopa Cargo yenguva pfupi mumhinduro dzeCabin
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kuvakazve • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Nyowani Yekuwedzera Type Chitupa (STC) mhinduro ichaita kuti vanoshanda vatakure mutoro mumakamuri eA330-200 uye A330-300 ndege
Airbus neLufthansa Technik vanosaina chibvumirano chekudyidzana
Mhinduro nyowani inosanganisa chiitiko cheAirbus seOEM yendege nehunyanzvi hweLufthansa Technik mukugadzirisa maSTCs uye nekuvandudza kwendege.
Airbus inoratidza kutarisisa kwayo kutsigira vatengi nekuunza mhinduro nyowani kumusika
Airbus neLufthansa Technik (LHT) vasaina chibvumirano chekushandira pamwe kuti vagadzirise kwenguva pfupi "Cargo muCabin" mhinduro dzeA330s. Iyi nyowani yeS Supplemental Type Chitupa (STC) mhinduro ichaita kuti vanoshanda vatakure mutoro mumakamuri eA330-200 uye A330-300 ndege.
Pasi pechibvumirano LHT muridzi we STC uye ichapa zvigadziriso zvevatengi, nepo Airbus'basa seOEM rinosanganisira kupa data rehunyanzvi, humbowo hweinjiniya uye kuverenga kwekushanda. Maitiro acho ane kutanga kubvisa zvigaro uyezve nekuisa indasitiri yakajairwa "PKC" mapallet nemambure pachigaro chikuru. Uku kumisikidza kunotora mukana weiyo A330 yakanaka yekushandisa economics uye akasiyana-siyana kabhini.
"Iyi mhinduro nyowani inosanganisa ruzivo rweAirbus seOEM yendege nehunyanzvi hweLufthansa Technik mukugadzirisa maSTC uye kukwidziridzwa kwendege," anodaro Daniel Wenninger, Musoro weAirframe Services kuAirbus. "Munguva dzino dzekuderedzwa kwevatakurwi, vatengi vedu vari kutsvaga mhinduro nekukurumidza kuti vawedzere kugona kwekutakura zvinhu mukamuri iri."
"Tinobatana neAirbus munguva dzenjodzi kuti tipe mhinduro yakanaka kune vanoshandisa ndege. Isu tinobatsirana kubva kune hunyanzvi hweumwe neumwe muzvinhu zvakawanda uye nekudaro tinogadzira chirongwa chekubatana pamwe mune ramangwana, "anodaro Soeren Stark, Chief Operations Officer & Accountable Manager ku Lufthansa Technik.
Iyi mhinduro nyowani inopa volumetric cargo chinzvimbo chakatenderedza 78m3 pane huru dhizaini yeA330-200 ine gumi nemaviri PKC pallet nzvimbo uye 12 mambure. Zvichakadaro, iyo A18-330's main deck cargo capacity ichave yakatenderedza 300m3 iine 15 PKC pallet nzvimbo uye 19 mambure.
Kubudikidza nekubatana uku neLufthansa Technik, Airbus inoratidza kutarisisa kwayo kutsigira vatengi nekuunza mhinduro nyowani kumusika.